Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Ụmụ Arjen Robben Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Agbanwe
LB na-eweta Full Story of a Football Legend best known by the nickname; 'Nwoke nke Igwe'.
Anyị Arjen Robben Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Dutch, Chelsea na Bayern Munich Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, Ndụ Ezinụlọ na ọtụtụ nkwụsị na ON-mara obere ihe ọmụma banyere ya.
Tupu m bido, Akpa… Ka m juo; Ọ ga - ekwe omume ikpokọta ndepụta nke nnukwu ihu na - ekwughị Arjen Robben? Echeghị m. Ugbu a, ka anyị bido.
Arjen Robben Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Arjen Robben na 23 nke Jenụwarị 1984 ka nna ya, Mr Hans Robben, onye na-elekọta football na nne ya bụ Marjo Robben, onye ama ama. Ọ bụ nne na nna ya zụlitere ya na nnukwu obodo satellite na Groningen, Netherland.
Arjen n'oge ọ bụ nwata adịghị egosi mmasị na agụmakwụkwọ ọbụlagodi mgbe ndị mụrụ ya kwenyesiri ike n'otu n'otu.
Kama nke ahụ, ọ masịrị iso nna ya mgbe ọ na-azụ ahịa football. Arjen nwere mmasị na bọlbụ mgbe ọ dị obere.
Arịrịọ ya ịbanye na agụmakwụkwọ ntorobịa mgbe ọ dị obere nke 2 mere ka ndị mụrụ ya ghọta ma ghọta ọdịnihu nke nwa ha nwoke. Akara aka na-egosi ya ịghọ nnukwu ndị egwuregwu bọọlụ.
Ha alaghị azụ n'ịdenye ya n'ụlọ akwụkwọ kacha mma ụmụaka bọọlụ n'obodo ha.
Arjen Robben Ntorobịa Football ID.
Mgbe ụmụaka ndị ọgbọ ya na-ahapụ ụlọ n'ụtụtụ maka agụmakwụkwọ, Arjen Robben hapụrụ ụlọ akwụkwọ bọọlụ ya. O sonyere na Arjen Robbenunior na-agba bọl dịka nwatakịrị.
Ọbụna dịka nwatakịrị, Arjen mere ihe dị ebube. Ọ ghọrọ ọdụdụ nwa ka ọ mụtara Usoro Nchekwa, usoro nke football nke mepụtara Wine Coerver.
Usoro nchekwa chebere mkpokọta nke egwuregwu bọọlụ gwụchara site na vidiyo nke akụkọ mgbe ochie dịka Pelé na Maradona.
A na-enyefe nkà ndị a site n'ụzọ agụmakwụkwọ zuru oke na-eto eto eto eto na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ.
N'okpuru usoro a, ụmụaka chọrọ ka enwee ihe ịga nke ọma site na isi, ịgafe, ọsọ na njedebe na-egbu egbu.
A na-ahụta Arjen Robben dị ka nwa ọkpụkpọ bọọlụ kacha mma nke masịrị onye na-elekọta ọrụ.
Arjen Robben Ndụ Ezinụlọ:
Nne ya: Oriakụ Marjo Robben, bụ onye ama ama n’obodo ahụ maka ama ama n’ikwu okwu ihu ọha ya na ikere òkè ya na mmemme Eurosonic Groningen nke na-eme na Netherlands.
Arjen Robben's Mama.
Ọbụna dị ka ọkà okwu ihu ọha nke kwenyere na agụmakwụkwọ maka ntorobịa, ọ kwenyere na nwatakịrị ọ bụla kwesịrị ihe ha chọrọ ịbụ.
Ruo ugbu a, a hụrụ ya n'anya maka ịkwado mkpebi Arjen inwe ịgba bọlbụ na ọ bụghị agụmakwụkwọ mgbe ọ dị obere.
Nna ya: Mazị Hans Robben's bụ akụkọ ifo na azụmaahịa azụmaahịa bọọlụ. A na-eto nwoke a na-elekarị anya na onye na-azụ ahịa azụmaahịa maka inye ezigbo ntọala maka iwepụ nwa ya nwoke na football.
Nna Arjen Robben.
Ọ bụ mgbe niile ka onye ọrụ Arjen na onye njikwa. Mr Hans na-akwado ma na-eme ihe niile Argen na-etinye na nkwekọrịta. A na-ese onyinyo abụọ ahụ ọnụ na-eme ihe kachasị mma.
Ọnye na-bụ Bernadien Eillert? Nwunye Arjen Robben:
Arjen Robben na Nwunye.
N'azụ Dutch na Bayern Akụkọ Mgbe Ochie, enwere otu nwanyị obi ya. Arjen Robben zutere nwunye ya, Bernadien Eillert n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị azụ n'afọ 2000.
Mgbe afọ isii nọ na mbedo, ha abụọ kekọtara eriri ha na Stadsschouwburg dị na Groningen nke dị na ugwu na 6 June, 9.
A gọziri ezinụlọ ya ugbu a na ụmụ atọ aha ha bụ Luka, Kai na Lynn. Ọ bụ nwoke zuru oke.
Ezigbo ezinụlọ ya kwuru; “Ihe kachasị mkpa bụ ịhụ onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ ka ọ dị mma ma nwee obi ụtọ. Football bụ ndụ m mana ahụike na obi ụtọ ezinụlọ m bụ ihe kachasị mkpa n'ụwa ".
Arjen Robben nwere mmasị inwe ihe osise ezinụlọ. Oge ndị a na-egbu oge. Ọ na - ejide ezinụlọ ya niile n'otu oge.
Arjen Robben Family Eserese.
N'etiti ụmụ ya niile, ọ nọ nso nwanne ya nwoke bụ Luk. Nke a bụ Arjen Robben na Ọkpara, Luka
Ihe na-emetụ ya n’obi mgbe ọ hụrụ nwa ikpeazụ ya 'Lynn' na-eti mkpu mgbe ọ hụrụ nna ya ka ọ na-eme ihe mgbaru ọsọ ya n'ọtụtụ ebe ọ nọ.
Ikekwe ọ chọrọ ịnọ n'aka nna ya. Ma Bernadien Eillert na di ya akasila nwa ha obi n'oge a.
Bernadien Eillert na-elekọta di ya karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-agbada n'ọsọ asọmpi ọhụụ ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ. Ụzọ dị mfe isi mee ka obi dị ya mma bụ ịkpọrọ ya gaa n'ozuzu.
Pingnagide mmeri UEFA Champions League: Mgbe ị nwere nwunye na-ahụ n'anya.
Ndụ Arjen Robben - forhụnanya Maka Beautifullọ Mara Mma:
Jenlọ mara mma nke Arjen Robben na-adọrọ mmasị karịsịa mgbe a na-ahụ ya site n'akụkụ ya. Ọ bụghị naanị nwoke nke iko, ma ọ bụ otu n'ime klas.
Jenlọ Mara Mma nke Arjen Robben.
Jenlọ Arjen Robben Museum:
Ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ụkwụ na-ejikwa na-edebe nanị otu ụzọ dị nta nke ihe ndị a na-ejide n'aka ọrụ ha. Arjen Robben wee jiri akwụkwọ akụkọ kwadoro na ọ dịghị ihe dị mkpa echefuru.
Ihe mere o ji chọọ ụlọ ngosi ihe nka.
O kwuputala atụmatụ ya iji wuo ụlọ ihe ngosi nka iji tinye ụlọ ncheta ya niile n'ụlọ ya mgbe ọ kpọrọ ya oge na ọrụ ya dị ebube. N'okwu ya;
'Mgbe mụ na nwunye m biri n'ụlọ anyị, m na-arọ nrọ ịnakọta ihe m niile ma wuo ụlọ ngosi ihe nka nkeonwe. Ọ ga-abụ maka m, ezinụlọ m na ezi ndị enyi m, '
Ihe kpatara n'aha aha 'Nwoke nke Glass':
A maara maka nnukwu egwu ya na nku ya, ike ịmepụta ihe na nnukwu egwu n'ihu ihe mgbaru ọsọ. Onye nwe ya nwetara utu aha ya bụ 'The Man of Glass' n'ihi na o nwere ike ịkwụsị ngwa ngwa.
Arjen Robben - Ebumnuche kpatara aha ya bụ 'Nwoke nke Igwe'
Ọ bụ ngagharị mere onye Netherlands bụ onye kachasị atụ egwu n'ụwa, na ihe ọ na-aga n'ihu na-eme n'ụzọ ziri ezi.
Arjen Robben achọtala otu n ’aka aka ekpe ya. Nke a kpatara mmetụta nke mmụọ na-adịghị mma n'ihi na ihe mgbu ọ chere na-eyi egwu egwu nke ndụ ya.
O chere na nke a bụ kansa cancer. Maka ya, naanị nhọrọ iji chọpụta ihe ọ bụ bụ ịwa ahụ. N'ụzọ dị mma maka ya, e wepụrụ ya na egwu a ozugbo ọwa ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ.
N'akụkọ, Robben kwuru;
“Ijọ tụrụ m nke ukwuu. Oge siiri m ike. Echere m na football m agaghịzi adị mkpa. Nchere ahụ jọgburu onwe ya maka ụbọchị ole na ole.
Amaghị m ihe ga-eme m. Mgbe ịwa ahụ ahụ gasịrị, anụrụ m na akụkọ ahụ dị mma ma ọ bụ nnukwu enyemaka. ”
Arjen Robben Biography - Ndụ Tupu amema:
Ọ bụ na Groningen ebe ọ kwadoro nkà akara ugo ya ugbu a nke ịkpụ n'ime mpaghara ikpe site na nku ya na ịchọta azụ nke ụgbụ.
N'oge na-adịghị anya, onye uwe ojii ahụ tinyere onwe ya n'ime ihe osise mbụ na ọ bụ Groningen's Player of the Season na 2001. N'oge na-adịghị anya, talent Robben nwetara uche nke nnukwu klọb
N'ihi ikike ndị na-agba ọsọ ya na nnukwu ịgba ọsọ ahụ, ụlọ ọrụ FC Groningen na-edebanye ya ngwa ngwa, bụ ebe o mepụtara nkà pụrụ iche nke ịkụcha n'ime iji nweta ihe mgbaru ọsọ site na iri na abụọ. Ọ na-egwu egwuregwu mbụ ya maka Groningen na 2000, na-abịa dị ka onye nnọchiteanya megide Waalwijk.
Ebe ọ bụ na Robben adịghị eleghachi azụ azụ, ọ bụkwa n'ihi nnukwu nkà ọ rụpụtara na-agafere ụfọdụ klọb kasịnụ n'ụwa, ụdị PSV Eindhoven (Netherlands), Chelsea (England), Real Madrid (Spain) na ndị giants Giants Bayern Munich.
Audi enyela Arjen Robben ụgbọala ọhụrụ ha. Ọ hụrụ Audi n'anya A5 - ụgbọ ala nke ọ zụtara maka $ 58,500.
Arjen Robben si Audi.
Ọ hụrụ n'anya ịme klọb n'inye ụgbọ ala ya dị ka akụkụ nke nkwekọrịta ya. Mụ na ya na-enweta ọtụtụ nde kwa afọ, iburu ụgbọ ala ọhụrụ abụghị ihe ọhụrụ.
Audi ya biara na akara mpempe akwụkwọ ahaziri iche, na-eme ka amata ya dị ka nke ya.
Otu oge, ọ na-eme ememme mmeri site na ị beerụ biya si na nnukwu iko.
Arjen Robben hụrụ Beer n'anya - kọwara.
Arjen Robben Bio - Nsogbu Igwu
Maka Arjen Robben, Igwu abụghị ihe dị mfe. Ọ na-esiri ya ike mgbe niile ịchọ ụzọ kachasị mma na ụzọ kachasị mma iji lụso mmiri mmiri ọgụ.
Foto dị n'okpuru ebe a na-egosi Dirk Kuyt (Nwoke ahụ sitere na Ezinụlọ Azụ) na-enyere ya aka ka mmiri ghara iri ya n'oké osimiri.
Ihe Mberede Mgbaru Ọsọ:
Mgbe Arjen Robben meriri Bayern Munich megide Braunschweig na mmeri 2-0 maka ndị isi Bundesliga, o chere na ya ga-eme ememme mmịfe. N'ihi obi ụtọ, a na-ebo ya ebubo ngwa ngwa maka ndị agbụrụ ụlọ ya n'ụdị. O di nwute, ememe ikpere ikpere ya na-esi na ihe ojoo rue ihe jọgburu onwe ya, ebe o na-esi n'elu ahihia weghachite azu ya, na-agbapu leggings ya na usoro a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụghị nanị na ọ na-agabiga nnọọ njọ ma na-ele anya na ọ na-egbu mgbu, ma iji kpochapụ ya, a kpochapụrụ sọks ya. Ebibiwo!
N'oge mgbe ị na-eme caricature vidiyo nke ndị ịgba ọsọ ụkwụ, Arjen Robben anaghị ahapụ ya. Nke a bụ ihe ọ nwetara mgbe akpọrọ ya dị ka a 'aghụghọ aghụghọ'.
Arjen Robben Bio - Okwu Nri Isi:
Ọnwụ ntutu bụ isiokwu dị nro maka Arjen Robben. Arjen Robben ntutu na-aga n'ihu ngwa ngwa maka ya na ntutu isi ya.
Ọ bụghị n’oge gara aga ka Robben nwere ntutu mana ugbu a ọ kpụrụ isi n’isi ya. Ana m eziga n'okpuru foto nke ntutu Arjen Robben, yana ese foto nke ntutu ntutu Robben.
Ga-ahụ ọganihu ngwa ngwa nke mere na ihe na-erughị afọ 6. Robben malitere ịkpụ ntutu site na 2006 ruo 2007 & site na 2014 ọ nweghị ntutu n'isi ya.
Arjen Robben Biography Eziokwu - Mkparịta ụka:
Arjen Robben nwere ike ịbụ ezigbo onye egwuregwu bọọlụ, mana onye Dutch Dutch ahụ akaghị aka nwere omume nke ịkpasu onye ọ bụla iwe.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị echegbu onwe ya banyere mmeri n'asọmpi ọ bụla, n'abalị Sọnde, ọ nweghị ihu ọma ọ bụla site na ịnweta ntaramahụhụ na-akpata esemokwu n'oge emesiri merie Holland na njedebe ikpeazụ-16 na Mexico. Kedu onye kacha egwu egwu na bọọlụ niile?
Dutchman meriri n'akụkụ ya ntaramahụhụ dị nro iji merie akụkụ ya na World Cup nke ikpeazụ-16 zutere, mana ebee ka ọ nọ n'ọkwa ndepụta oge niile na-adịgboroja?
Ọbụna n'oge ọ na-azọchasị mmanya ya, ọ ka na-aghọgbu ndị na-edegharị akwụkwọ.
Arjen Robben Biography Eziokwu - Nkọwapụta Nnukwu ewu: